MAYELANA NATHI CMOAPI
Siyimboni yezemithi ehlanganisa i-R & D neyokukhiqiza.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. eyasungulwa ngo-2007, yinkampani yebhizinisi yezobuchwepheshe ebambe iqhaza ocwaningweni, ekuthuthukiseni nasekukhangiseni izinto zokwenziwa kwamakhemikhali.Imikhiqizo yenkampani ye-mianly: I-Lorcaserin, i-intermediates yeLorcaserin, i-orlistat, i-Sesamol, i-tadalafil kanye nmaphakathi ne-tadalafil, njll.
Ifektri yethu inemishini yokutholwa ebanzi, ama-60 amasethi we-HPLC, amasethi angama-20 ama-chromatographs, i-LCMS, i-ELSD, i-ultraviolet kanye nama-spectrometer abonakalayo, amaqhwa omisa nezinye izinsimbi eziphambili. Kudlule i-ISO14001, ISO9001 kanye nesitifiketi se-DMF ngokuhlanganiswa nokuthengwa, futhi inezinhlelo zokuphathwa kwekhwalithi ephelele.
Naka ukuvikelwa kwempahla yengqondo
Inkampani yethu isebenzisa ochwepheshe abaningi abaphezulu abanemininingwane yocwaningo lwasemazweni aphesheya, futhi inamandla aphelele ezifundo zelebhu, ukuhlolwa kwezindiza nokukhiqiza kwezimboni.
Kukhona odokotela abayi-11 kanye namakhosi angaphezu kuka-46, ososayensi, kanye nonjiniyela enkampanini yethu.Isizinda sokukhiqiza i-API sihlanganisa indawo engaphezu kwe-40 mu.Isihlahla sokhemikhali se-GMP sihlanganisa indawo engaphezulu kwe-160mu futhi sinendawo yokusebenzela yanamuhla, i-labour laborator kanye nezakhiwo zokutholwa , indawo yokuhlala, izindawo zokuhlala ezingcolile, nokuningi.